Onye na - eme ntutu kacha mma HS-8006 Manufacturer and Factory | Tingxuan
Brand aha: Tinx
Agba: Agba agba ahaziri iche
Ihe ntinye: FOB
Etiti oge: 40-60days
Super ezigbo: TINX ntutu na-ehicha ntutu na-ejikọta teknụzụ ion kachasị ọhụrụ na mkpuchi seramiiki iji nye gị ọdịdị silky na kenkowaputa. Na seramiiki glaze, ọ gaghị ada mbà ọ bụrụgodi na ejiri ya mee ihe maka oge nde 5.
Mee ntutu na-egbu maramara: n'ihi nhazi ezé ya buru ibu ma sie ike, ị nwere ike ihicha ntutu gị na nkeji ole na ole, nke dị iche na nke na-eme ka ọdịnala dị. Igwe ntutu a na-agbazi ntutu nwere ike ime ka ụda bangs dịkwuo elu.
Ultra ngwa ngwa kpo oku: furiden ntutu na-agbazi ahịhịa nwere ike ewe iwe na ọnọdụ elekere na oge edere na-enweghị igbu oge. Mee ntutu dị mfe ozugbo ozugbo ma belata oge ọ ga-ewe iji dozie ntutu gị.
Na-agba ọkụ na-ere ọkụ: Ọ bụ ezie na enwere ike ịme ka ahịhịa ntutu kwụ ọtọ na 400 Celsius F, teknụzụ mgbochi na-ekpo ọkụ ma na-eguzogide okpomọkụ nke ahịhịa ga-echebe ntutu gị site na okpomọkụ.
Kwesịrị ekwesị maka ụdị ntutu niile: furiden ion ogologo ntutu ntutu kwesịrị ekwesị maka ụdị ntutu ọ bụla. N'ihi oke okpomọkụ ya, ịnwere ike iji ntutu a kwụ ọtọ maka ntutu dị oke ma na-agbanwe agbanwe, na-acha ntutu ọcha na ihe niile dị n'etiti.
Nọmba nlereanya HS-8006
Ihe onwunwe Efere
Typedị okpomọkụ PTC
Ngosipụta nke okpomọkụ Ikanam
Okpomọkụ 140 ℃ 、 160 ℃ 、 180 ℃ 、 200 ℃
Nha nha Plastic
Jikwaa Ihe Plastic
Jiri Home / salonlọ Mmanya / njem
Ọrụ Comb + Ntughari Ezigbo + ịhịa aka ahịhịa
Ojiji Home lonlọ Mmanya Promotion Travel
Njirimara Ala Comb
Ogologo Cdọ Ike 2.5M
Dị Ntutu mbo
Otu Oge Akpaghị Aka Ike Gbanyụọ
1. Ọnọdụ okpomọkụ bụ 176 Celsius F na 446 ° F (80 Celsius C na 220 Celsius C), nke bụ otu ihe ahụ dị ka ọkwa ígwè na ụlọ ọrụ ntutu ntutu ọkachamara.
2. Ọrụ Igwe Na-agba Ọsọ: Ọ nwere ike ikpo ọkụ na 180 Celsius C na 1 mins. Ntọala ọnọdụ 16 nwere ike idozi ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka obosara ụdị ntutu dị iche iche.
3. Okpomọkụ unit ịmafe Ọrụ: Pịa ma jide "+" ma ọ bụ "-" button 3 sekọnd ka ịgbanwee n'etiti Celsius na Fahrenheit.
4. Okpomọkụ mkpọchi Function: Pịa ike button 1 abụọ mgbe mwube na okpomọkụ nke ngwaahịa, ị nwere ike na- idebe okpomọkụ na ojiji.
5. Ọrụ Ncheta Okpomọkụ: Mgbe edozila ọnọdụ kwesịrị ekwesị, ọnọdụ ndabara nke ojiji ọzọ bụ ịtọ.
6. Bọtịnụ Dị Mfe: bọtịnụ ike, okpomọkụ “+”, bọtịnụ “-”.
7. Nchekwa onwe Na-arụ Ọrụ: Ngwaahịa a ga-agbanyụ na-akpaghị aka mgbe 30 mins na-enweghị ọrụ.
8. Mbụ Default okpomọkụ: 302 ° F (140 ° C)
3 na 1 Styler Hot Air Brush Dries
Onyinye Igbe Akụkụ: 40.5 * 14 * 9 CM
Akụkụ Carton: 44 * 38 * 42 CM
Nkeji maka Master Carton: 12PCS
Ogologo Powerdọ Ike: 2.5M
Super Kwụ Ọtọ - Ikuku Sanwichi Design
Chebe ntutu gị site na mmebi, na-eme ka ntutu gị dị ka silky ma na-enwu gbaa.
Jụụ na ịke
ma debe ya ka ọ di ogologo
akwa njupụta na mgbochi burncomb ezé, dị mfe nghọta ntutu gị, mee ka edozi isi gị ma na-egbu maramara
obere-mjupụta mbo ezé, easyto burn, enweghị ike ịghọta thehair, enweghị mmetụta mgbe ojiji.
Ngwa: Ezinaụlọ, Hairlọ Mgba ntutu, salonlọ Mma, Hotel, Dlọ obibi, wdg
OEM & ODM: anabata
Ngwugwu Type: Onyinye igbe
Tụkwasịnụ Ikike: 150000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Isi ahịa mbupụ: Europe, North America, Asia, Mid East, Africa, Australia, Brazil, wdg
Typedị azụmahịa ： Onye na-emeputa ihe
Main Ngwaahịa: ntutu ntutu, curler ntutu, ntutu ịgbatị ntutu, wdg
Mba / Mpaghara: Zhejiang, China
Ndi nwere: Onye nwe ya
Number nke n'ọrụ: 400-450
Afọ nguzobe: 2006
Total Revenue Revenue: nzuzo
Ngwaahịa ngwaahịa: EMC, CCC, ROHS, CE
Ikike nchọpụta: Ọdịdị dị n'ile anya na-ese akwụkwọ asambodo patent
Main Export Ahịa: Europe, North America, Asia, Mid East, Africa, Australia, Brazil, wdg
1.Anyị nwere afọ 15 nke ahụmịhe ọkachamara dịka onye na-emepụta ntutu isi, ntutu ntutu na ntutu na-agbazi ntutu.
2.We nwere nyocha siri ike na ndị otu na-emepe emepe iji gboo mkpa ngwaahịa gị.
3.Our price bụ ihe ezi uche dị na na na-top àgwà ọ bụla ahịa.
4.We na-enye ngwa ọrụ ntutu ntutu dị elu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ama ama n'ụwa.
Nke gara aga: Nnennen ntutu ahịhịa HS-686A
Osote: Ntutu ntutu S201
Nnennen ntutu ahịhịa HS-686A